Qilaafka baarlamaanka Somaliland - BBC Somali
Qilaafka baarlamaanka Somaliland
21 Disembar 2013
Waxaa soo shaac baxay qilaaf u dhexeeya gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland iyo labadiisa ku xigeen. Maanta oo rasmi ahaan u furmay kalfadhiga cusub ee golaha, ayaa waxaa ka maqnaa labada gudoomiye ku xigeen.
Gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdiraxmaan maxamed Cabdilaahi, gudoomiye ku xigeenka Baashe Maxamed Faarax iyo ku xigeenka labaad, waxay isku qilaafsan yihiin isku shaandhayn gudoomiyuhu dhowaan ku sameeyay guddi hooseedyada golaha wakiilada.
Isku shaandhaynta cusub ee guddi hoosaadyada oo guddi kasta xubno cusubi iyo gudoomiye cusub loo magaacaabay, ayaa maanta goluhu cod aqlabiyad ah ku ansixiyay guddiga joogtada ah.
Golaha wakiilada ee Somaliland waxay kaloo cod aqlibiyada ah ku ansixiyeen, ajendaha kalfidhigan, hase yeeshee labada gudoomiye ku xigeen oo aan fadhiga iman ayaa BBC u sheegay, in fadhiga maanta ee golohu uusan sharci ahayn, arrintaana ay gaynayaan maxkamadda sare.